Qoyskeyga oo aan kala dhunnay 26 sano ka hor ayaan Whatsapp ka helay - BBC News Somali
Qoyskeyga oo aan kala dhunnay 26 sano ka hor ayaan Whatsapp ka helay
Grace Umutoni oo yar (Bidix) iyo sawirkeeda haatan (Midig)
'Mucjisadii aan ku duceysan jiray'
"Markii aan arkay sawirradiisa, waan isku ekaannay" Umutoni ayaa sidaas u sheegtay BBC-da qeybta la hadasho gobollada harooyinka waaweyn.
"Balse baaritaanka dhanka dhiigga hidda-sidaha ayaa lagu ogaan karaa in aan ehel naha, marka waxaan tegnay Kigali si aan arrintaas u sameyno."
Grace Umutoni iyo abtigeed Antoine Rugagi
"Waan naxay, mana qiyaasi karin sida farxaddeyda ay maalinkaas aheyd, xitaa maanta walisi buuxda iigama dhaahdicin oo riyo ayaan u haystaa, waa mucjiso markasta aan ku duceysan jiray" ayay tiri Umutoni.
Grace Umutoni iyo hooyadeed Liliose Kamukama
"Gabadha waxay uu muuqataa in uu dhalay walaalkey Aprice Jean Marie Vianney iyo dumaashidey Liliose Kamukama kuwaas oo lagu dilay xasuuqa"
'Waxaan u maleynay in qofna uusan badbaadin'
"Waxaan u maleynay in aanay jirin qof badbaaday, waxaan sanad kasta sameyn jirnay baroor diiq lagu xusayo dadkii ku dhintay xasuuqa" ayay tiri Grace Umutoni eedadeed.
'Waxaan ku noolaa murugo'
"Saraakiisha dugsiga sare ee aan wax ka dhigan jiray ayaa i caawiyay, waxay tegeen xaruntii agoonta ee Kigali ee aan kusoo koray si ay usoo helaan ehelkeyga" ayay tiri Grace Umutoni.
"Markasta waxaan ku noolaa xaalad murugo ah oo ku saabsan in aan garaneyn ehelkeyga balse waxaan Alle ka baryi jiray in uu soo dedejiyo mucjisada"
"Qoyskii isoo korsaday si wanaagsan ayay iila dhaqmeen xitaa ma dareemin in waaliddiintooda ay iga maqan yihiin"
'Waxaa mahadsan qoyskii soo korsaday'
Tan iyo sanadkii 1995-tii, ku dhawaad 20,000 qof uu badnaa carruur ayaa la midoobay qoysaskooda, waxaana arrintaasi fududeysay hey'adda ha'yadda laanqeyrta cas.
"Waxaan ka codsanaa dadkii ka badbaaday xasuuqa inay iska diiwaan geliyaan xarumaha lagu xanaaneeyo agoonta" waxaa sidaas BBC-da u sheegay afahayeen u hadlay ha'yadda.
Tan iyo sanadkan, Ha'yadda ICRC waxay qoysaskooda dib ula mideysay ilaa 99 qof kuwaas oo aan wax ah ka heyn qoysaskooda muddo 20 sano ah.
"Waxaan u mahadcelineynaa qoyskii magacan u bixiyay ee soo korsaday"
Waxaa farxad ii ah in qoyskii i dhalay iyo kuwii i soo koriyyayba ay labaduba i jecal yihiin"
"Haatan waxaa si joogta ah ula xiriira qoyskeyga, ehelkeyga, eedayaashey iyo walaalahey"
"Balse haatan waxaan dareemey in aan leeyahay labo qoys, qoyskii i dhalay iyo kuwii isoo korsaday"